COMlọ ọrụ UAV EXPO AMERICAS - Geofumadas
Mee, 2021 GPS / Equipment, Engineering, innovations
Nke a na September 7,8, 9 na XNUMX nke afọ dị ugbu a ga-eme na Las Vegas Nevada - USA the "UAV Expo Amerika". Ọ bụ ihe ngosi ahia ahia nke North America na ogbako na-elekwasị anya na ijikọ UAS na azụmahịa na ndị na-eme ihe ngosi karịa ihe omume ọ bụla ọzọ. Ọ na-ekpuchi isiokwu gbasara iwu ụlọ, ike na ọrụ ọha na eze, Oke ohia na ọrụ ugbo; Akụrụngwa na Transportgbọ njem; Mining na nchịkọta; Ọrụ mberede na nchekwa ọha; Nchedo; na Ala na ihe osise
Na mgbakwunye, ọ gụnyere isiokwu gbasara ihe ịma aka na ohere ndị COVID-19 gosipụtara, usoro nhazi, usoro nchekwa nke UAS na ikuku, yana teknụzụ UAS na-emebi.
Obere ihe karịrị ndị ngosi 100 sitere n'akụkụ ụwa niile ga-eweta ihe ọhụrụ ha, ngwaahịa na ngwọta metụtara drones, iwu, ike, ọrụ ugbo, akụrụngwa, njem, mmeghachi omume mberede ma ọ bụ ihe osise. Dị ka ọ dị na mbipụta ndị ọzọ nke nnukwu ihe omume a, ọ ga-egosipụta nnọkọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nsogbu na ohere dị iche iche nke ụlọ ọrụ ọ bụla, yana usoro kachasị mma maka njikọta na arụmọrụ na-adịghị mma.
Ebumnuche nke ihe omume ahụ bụ iji dọta ndị ọrụ nwere mmasị na ụlọ ọrụ UAV, na-enye nkwukọrịta zuru oke n'etiti ndị ọkachamara na ndị isi nke ngwaahịa ọ bụla ewepụtara. Yabụ, ịmepụta ohere njikọ ga - ebido, yana mkparịta ụka maka inweta ihe ngwọta ma ọ bụ ngwaahịa na - emegharị maka mkpa. A na-atụle isiokwu miri emi metụtara ajụjụ ndị a na ogbako a:
Kedu ihe na-aga n’ihu FAA?
Kedu ka drones nwere ike isi mee ka azụmahịa gị kwalite?
Kedu mgbe anyị ga-ahụ usoro ihe mebere UTM?
Kedu otu nzukọ nwere ike isi mepụta usoro ihe omume drone n'ọtụtụ?
Kedu ihe ID ga-apụta maka ọdịnihu nke mbara igwe?
Kedu ka nghọta ọha na eze banyere drones si emetụta nnabata?
Kedu otu nzukọ kwesịrị isi gbakọọ ROI nke UAVs?
Ọ nwere usoro kachasị mma iji mee ka ọrụ nchekwa nke ụlọ ọrụ?
Kedu ihe ọ pụtara iji mejuputa drones na-eji ngwa AI na ML?
Kedu ka ndị ọrụ ga-esi kọwaa uru nke teknụzụ mmiri dị na arụpụta arụ ọrụ, ịdị mfe nke iji ya na uru ya?
A na-egosipụta UAS kachasị mma sitere na ndị na-eweta ihe ngwọta ụwa na ihe ngosi, na-ahụkwa ụzọ dị mma iji tụọ ma tụnyere ngwọta. A na-ekewa ihe omume nke ụbọchị ndị ae kwuru na mbụ: Septemba 7: Mbido ogbako, ngosipụta na ogbako yana site na Septemba 8 ruo 9: Mmemme nzukọ na ngosi.
¿GN MERE MERE EGWU?
Na mbu, inwe oghere iji gbanwere echiche na ndị ọkachamara na ndị isi ụlọ ọrụ bụ otu n’ime ihe mbụ mere eji aga ọmụmụ ihe a. Kedu otu ndị a si bịa na mmepe nke ihe ngwọta na ngwaahịa iji melite ọrụ ma ọ bụ usoro nke ndị nyocha na-eme kwa ụbọchị.
Ihe ọzọ kpatara ya bu ohere nke ijikọ ndị isi na ịkwalite ihe ọmụma na mpaghara achọrọ. Ọzọ, anyị nwere ike ikwu na ụdị ihe a dị mkpa iji mee ka teknụzụ kachasị ọhụrụ pụta ìhè, na-akwalite ngosipụta na iwepụta nkwekọrịta ma ọ bụ njikọ aka ga-ekwe omume. Na ogbako a, ndi isi, ndi okacha amara ma obu ndi mmepe nwere ike gosiputa ihe ndi edeturu banyere ikike nke ngwa ahia ha ma gosiputa ihe e kere ha.
Fọdụ nwere ike na-eche, ndị nwere ike ịga ihe omume a: Ndị nwere akụ na ndị ọrụ, EPC (Injinia / Nweta / Mwube), AEC (Architects / Engineers / Construction), Ndị nyocha, ndị isi teknụzụ, ndị njikwa ọrụ, ndị ọrụ ugbo na ndị na-ahụ maka ọka, Ndị na-aza ajụjụ mbụ na iwu Mmanye.
Na ebe nrụọrụ weebụ ogbako, ha nwere ike ịnweta usoro nke webinars kachasị n'efu metụtara ngwa UAV. Fọdụ n'ime aha ọmụmụ ihe ndị a bụ: "AI Drones: Na-etinye UAV Intuitive Na-arụ Ọrụ","Nkwupụta oge-oge: UAV mmetụta na nchekwa ọha”. Ohere iji meziwanye ihe omuma ma tinye aka na nrigbu nke ihe omuma ihe omuma ndi a. Na mgbakwunye, webinars metụtara mbipụta gara aga nke ọgbakọ a na-ebukwasịkwa na webụ, ọ bụrụ na enwere onye nwere ike nyochaa ọdịnaya a.
Ọnụ ego nke nzukọ a dịgasị iche dabere na ụbọchị a họọrọ na ụdị nnabata n'etiti $ 150 na $ 895, ị nwere ike ịhọrọ mbelata otu. E nwere Full gafere, Otu ụbọchị, Droneresponders, na ọnụ ụzọ naanị na showroom. Enwere ike nyochaa ha na webụsaịtị mmemme site na ịpị ebe a.
Nfefe ma ọ bụ n'efu bụ naanị maka mpaghara ngosi ahụ, ebe ị ga-enwe ohere maka mpaghara ebe teknụzụ azụmaahịa UAS kachasị ọhụụ na nke dị mkpa n'ụwa gosipụtara, yana ndị e mepụtara site na isi mahadum na " Mahadum Pavilion ”. Na mgbakwunye na nke dị n'elu, a nabatara "Thelọ ihe nkiri Halllọ Ngosi Ihe Ngosi", nke ga-enwe usoro mmụta maka ndị niile na-ege ntị. Ndị nwere nnwere onwe ga-enwe ọ toụ ịkparịta ụka n'withntanet na ndị bịara ya na ndị na-elekọta oche ahụ.
Enwere ike izipu ozi iji sonye na ihe ngosi ahụ yana akụkụ nke ndị na-ekwu okwu mmemme ahụ. A ghaghi iburu n'uche na ndi Board Advisory na ndi na-ahu maka Nzuko a ga-eme, jiri nlezianya nyochaa ihe nile aturu maka ndi nwere ike ikwuputa ma obu ndi na ekwu okwu na mbiputa a.
Anyị maara na anyị ka na-enwe ike ibute ọrịa site n'aka COVID-19, ọ bụ ya mere nzukọ ahụ ji were usoro nchekwa siri ike maka ndị bịara ya niile, yabụ ihe niile na-eme na gburugburu ebe obibi dị mma na enweghị ihe egwu.
Usoro mgbochi ndị elebara anya gụnyere: igbochi kọntaktị anụ ahụ, ndebanye aha na-enweghị kọntaktị, ịkpapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nhicha oge niile, ịdị ọcha aka, mmelite nchekwa nchekwa nri, mkpuchi ihu ihu (iji ihe nkpuchi), yana onye ruru eru inye enyemaka mbụ.
BANYERE Ndị Nhazi
A na-egosipụta UAV Expo Americas nke Commercial UAV News ma hazie Diversified Communications, onye na-emepụta ihe omume ụwa niile na-ahazi UAV Expo Europe (Amsterdam, Netherlands), GeoBusiness Show (London, UK) na Geo Week, nke gụnyere site na International Lidar Mapping Nzukọ, SPAR 3D Expo & Conference na AEC Next Expo & Conference. Nwere ike ịga na netwọkụ mmekọrịta ha maka ozi ndị ọzọ ụbọchị ndị na - abịa: LinkedIN, Facebook, Twitter, YouTube, b Instagram.
Ọ dabara nke ọma na afọ a Twingeo na Geofumadas na-ekere òkè dị ka ndị na-akwado ihe omume ahụ, na-enye mkpuchi zuru oke nke ihe omume ahụ maka ndị niile nwere mmasị. Anyị ga-ebu ụzọ wetara gị ozi niile.
Previous Post«Previous ESRI Venezuela na Edgar Díaz Villarroel maka mbipụta 6 nke Twingeo
Next Post Bentley Systems mara ọkwa nnweta nke SPIDANext »